कान कोट्याउने बानी छ ? सावधान !
हामीलाई कानकोे इन्फेक्सनबाट जोगाउनका लागि हाम्रो कानमा कानेगुजी बनेको हुन्छ । तर, हामीहरु यस कनेगुजी तथा कान सफा गर्नका लागि अनेक उपाय अपनाउने गर्छौं । कान आफैँ सफा हुने अंग हो । त्यसैले यसका लागि सफाई गर्नु पर्ने आवश्यक छैन ।
प्राय डाक्टरहरु कान सफा गर्नु आवश्यक नरहेको बताउने गर्छन् । हामीले बजारमा विभिन्न खाले कान कोट्याउने उपकरणहरु किन्न पाइन्छ । कान चिलाएको बेलामा होस् या यतिकै होस् कान कोट्याउदा हामीलाई बेग्लै खालको आनन्दको अनुभूति हुने गर्छ ।
तर, कान कोट्यादा हामीलाई फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा हुन सक्छ । यदी हामी आफैँले कान कोट्याउन र यसलाई सफा राख्न चाहन्छौं भने निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रो कान तीन भागमा बाडिँएको हुन्छ ।
बाहिरी भाग अर्थात् देखिने भाग, बिच्चाको भाग र भित्री भाग । बाहिरी भागलाई सफा कपडाले पुछेर सफा गर्न सकिन्छ । बिछाको भागको छाला निकै संवेदनशिल हुन्छ र यस भागमा कानेगुजी हुने गर्छ । भित्री भागमा इयर ड्रम हुन्छ । हामीले हाम्रो कानलाई राम्रोसँग सफा गरेनौ भने भित्री भागमा असर पर्न सक्छ ।
यदि हामी सफा गर्दा सावधानी नअपनाएर लापरवाही गरेमा हाम्रो सुन्ने क्षमतामा कम हुनुका साथै भित्री भागमा इन्फेक्सन समेत बढ्न सक्छ । कान कोट्याउँदा कानेगुजी निस्केभन्दा पनि भित्रसम्म कानेगुजी पस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
हामीले कानमा सेफ्टीपिन, हेयर पिन, सलाईको काँटी, पिन, प्वाख, कलम, कपास लगायतका वस्तुको प्रयोग गर्नु हुदैन । यस्ता वस्तुले सफा गर्नेभन्दा पनि कानमा खराबी गर्ने काम गर्छ । कहिलेकाँही कानै नसुन्न अवस्था समेत आउनसक्छ ।
कान दुख्यो भने, राम्रोसँग सुन्न छाडियो भने, कानमा हावा भरिएजस्तो वा कानमा कराएजस्तो भयो भने हामीले चिकित्सको सल्लाह लिनु पर्छ । कान सुक्खा भयो भन्दैमा हामीले कानमा तेलको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन ।